Kuqolwe uBoxer kwabuthwa utshwala - Ilanga News
Home Izindaba Kuqolwe uBoxer kwabuthwa utshwala
Kuqolwe uBoxer kwabuthwa utshwala
Kuthathwe obungalinganiselwa ku-R70 000
BAYOYIXOXELA amagwababa echobana into ebehlele onogada bakwaBoxer, eBhamshela, eNdwedwe, njengoba kuzosa ngoLwesibili kugasele imigulukudu yabakhomba ngezibhamu, yabalalisa phansi, yazitapela utshwala obudayiswa kulesi sitolo.
Njengoba izwe livaliwe ngenxa yokubheduka kwe-coronavirus, zilokhu zibikwe njalo izigameko zokugqekezwa kwezindawo ezidayisa utshalwa yimigulukudu okubikwa ukuthi eminye yayo isuke iyobudayisa ngenhle imali, kwazise iyazi ukuthi abantu bayafa yinxano.
Kuthiwa isigameko sakwaBoxer sethuse izisebenzi njengoba namanje kungacaci ukuthi ngobani abagile lo mhlola.
Ngokuthola kweLANGA, amadoda abalelwa ku-7 afike akhomba onogada ngezibhamu, abalalisa phansi, emuva kwalokho azama ukuvula umnyango omkhulu wesitolo kodwa ehluleka.
Kuthiwa aze angena ngemuva aqonda lapho kudayiswa khona utshwala, azitapela. Okuthuse abantu ngalesi sigameko wukuthi senzeka nje, kunombhalo obusabalele ezinkundleni zokuxhumana obukhuluma ngokuthi kugqekezwe kulesi sitolo.
ILANGA liwubonile lo mbhalo obuthi ngisho kungagqekezwa kulesi sitolo, vele amaphoyisa aseNsuze athatha isikhathi ukufika.
UMnu Fani Nkosi, oyimenenja kwaBoxer, uthi bashayeke kakhulu ngalesi sigameko kanti nezisebenzi zithukile.
“Laba bantu kuthiwa bebebalelwa ku-7, bakhomba onogada abane abasebenza ebusuku ngezibhamu. Bathathe oyedwa wabo bamqhuba beya naye emnyango omkhulu.
“Bahlulekile ukuwuvula babe sebejikela ngemuva, bagqekeza bangena ngaphakathi. Bawole utshwala obungabalelwa ku-R70 000. Babulayishe ezimotweni abebehamba ngazo maqede basabisa onogada, bashaya bachitha,” kusho yena.
Mayelana nomqhafazo obusabalele ezinkundleni zokuxhumana, uthi uzibonele naye lo mqhafazo, kodwa wangazitshela ukuthi ngabe yinto ekhona.
“Kuyimanje izisebenzi zithukile ngoba laba bantu kasazi noma bazobuya yini bazokhomba sezikhona. Kuyacaca ukuthi ngabantu abebefuna utshwala ngoba kabathintanga lutho lapho kudayiswa khona ezinye izinto, njengokudla,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuvulwe icala lokubamba inkunzi emuva kokuba abantu abangaziwa bekhombe onogada ngezibhamu qede bathatha utshwala.
Uthi amaphoyisa aseNsuze aphenya icala lokubamba inkunzi.
Previous articleUkhale wabuya nganeno
Next articleSekukwamazitapele emzuvele